Fampihofanana : vita ny fianarana miteny Italiana | Douanes Madagascar
30 no isan’ireo mpiasan’ny fadintseranana any NosyBe no nanaraka fihofanana hianatra teny Italianina. Fianarana naharitra teo amin’ny dimy volana teo, izay nanomboka ny volana oktobra 2018 ka nifarana ny antsasaky ny volana martsa 2019. Izany no natao dia noho ny fahamaroan’ny vahiny mpizaha tany Italianina mandalo any amin’iny faritra iny. Hanamora ny fifandraisan’ny mpiasan’ny faditseranana amin’ireo mpizaha tany Italiana amin’ny fanatanterahana ny asany no tanjona.
Ny foibem-pitantanan’ny fadintseranana no nikarakara sy namatsy vola ity fianarana ity, nisy ny fiarahamiasa tamin’ny « Chambre de commerce » ao NosyBe tamin’ny alalan’ andriamatoa RASAMY Marcel « guide touristique » izay nitondra ny fampianarana.
In-telo isankerin’andro no manaraka ny fampianarana ireto mpiasan’ny fadintseranana ireto ary nisy mihintsy fanadinana an-tsoratra sy ambava. Marihina fa misy vahiny Italiana nasaina manokana hanaovana fampiharana. Nomen’ny mpampihofana fitaovana toy ny video,boky,sns,… ireto mpiasa manaraka fihofanana ireto mba hampitomboan’izy ireo ny fahalalany ny teny Italianina.
Izany hezaka rehetra ataon’ny foibem-pitantanan’ny fadintseranana izany dia tafiditra ao amin’ny fanaovana ny mpiasa ho fitaovana fototra ho amin’ny fahombiazana.